U-Origami ubugcisa obudala baseJapan, obubandakanya ukuveliswa kweentlobo ezahlukeneyo zamaphepha. Njengoko imigaqo yolu hlobo, ubuchule obunjalo bubandakanya umsebenzi apho iphepha lemibala eyahlukileyo lisetyenziswa. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusetyenziswa kweesisi, i-glue, ukusika kunye neenyembezi kuyavalwa. Njengomthetho, i-origami yenziwe ngeekwere. Ngokombono weJapan, loo mfanekiso unobungqina obuchanekileyo lwefomu. Kungenxa yesi sizathu sokuba unamalungelo onke okuzala iifomu ezintsha.
Ukuqhubela phambili kwezi ngcaciso, kunokuthiwa ngokukhuselekileyo ukuba olu hlobo lobuchule lunentsingiselo enkulu yefilosofi, yingakho ngamnye wethu kufuneka azi indlela yokwenza i-origami ephepheni, ekwazi ngexesha elifanayo ubunzulu balobu buchule.
Kunokwenzeka ukuba wenze i-origami ephepheni ngokwakho. Into ephambili kweli shishini kukuzalisa isitokethi sakho sephepha uze ufumane umonde omhle. Ngokuqinisekileyo, uluvo lokuqala ngolu lobugcisa lunokwenza umonakalo wobuntwa kunye noluncinane, kodwa ukuba uthabatha umkhuba, uya kuwuqonda ngokuqinisekileyo njengolu xwebhu olunzima.
Fumana icebo lokwenza i-origami yeklasi ayinzima. Ngokomzekelo, imiyalelo efanayo ingafunyanwa ngokusebenzisa izixhobo ze-intanethi.
Indlela yokufunda ukwenza i-origami ephepheni
Ukuqala isenzo kulunge kakhulu kwizinto ezilula. Ukuze senze oku, sithatha iphepha elikwimifanekiso yesikwere kwaye uzama ukuthoba umvelaphi wezinga lesiseko. Ngokufanayo ngumbuzo wekwere, i-turntable kunye ne-pancake. Isikwere sisiseko xa udala yonke imvelaphi ye-classic enesilathiso sezilwanyana. Kuvela kwisikwere ukuba unokuqala zonke izidalwa eziyinkimbinkimbi. Ukuphanga i-origami, kwiphepha lethu senza iindidi ezininzi. Kabini ujikelele kwisiqingatha. Injongo yethu kukuba wenze iplanga emva kokudweba. Emva koko, ngendlela efanayo senza umnqamlezo ngeefolda, kodwa sele sisele kwicala lokudibanisa. Ngethuba apho ama-folds ekulungele, sithatha iphepha lokudibanisa ngokubhekiselele kumacangca kwaye sidibanise ndawonye. Ngenxa yoko, i-square yethu ephindwe kabini kwiintlobo ziya kukhula ngokwayo.
I-spinner okanye i-catamaran ngumntu owaziwayo onokuthi ancedise kuphela ekudaleni i-origami, kodwa kunye nokuzonwabisa ngokubantwana. Thatha iphepha kunye nokwenza ibokhwe kulo, okumele kufane nokufana kwesikwere. Ukongezelela, silungiselela ishidi kwisiqingatha. Isiqingatha ngasinye kufuneka siphinde sibe sisiqingatha kwakhona, ukuze senze iqela. Emva koko, sivula iphepha, esilithokoze kakhulu ngeefolthi ezahlukeneyo. Ekuqaleni, kunzima ukukholelwa ukuba lo mzobo ufihla ifomu ekwazi ukuhlaziywa lula. Ngoku sithatha ishidi ngasemva kwemida echaseneyo phakathi kwiphakathi kwaye siwadonsa kwinqanaba leefolthi ukuya kwiziko lesikwere. Ngenxa yoko, sifuna ukufumana i-hexagon enokunqunyulwa phakathi kwimiba ephakathi kunye nezine. Sibopha abo babini bachasayo kwaye ngenxa yoko, sinokubona oko kuthiwa kuthiwa yintambo.
I-Pancake idlala indima ekhethekileyo kwi-origami yobugcisa. Ngendlela, ukwenza i-origami ibe yinkalo eyandisiweyo yinkimbinkimbi, kufuneka ukwazi iifom eziphambili, enye yazo iipakeki. Kulula kakhulu kwaye kukuzonwabisa ukugqithisa eli nani. Ukuze senze oku, sithatha isikwere sephepha kwaye sigoba zonke iingalo zaso ezine. Ekugqibeleni, sifumana isikwere esincinci, esiyi-pancake.
Kwaye, ekugqibeleni, ukuba konke ukunyathela kwenzeke ngaphandle kokukhubeka, kuyimfuneko ukujonga ngokuthe ngqo ukuchaneka kweefolda kwinqanaba ngalinye lomsebenzi. Ukuba awukwenzi oku, koko kwixesha elizayo iifolda ziza kugqithiselwa omnye komunye, zisuse izinto. Ekugqibeleni, uza kufumana umkhiqizo onobuqili, owamanye amaxesha awunakukwazi ukukhutshwa kuze kube sekupheleni. Ukuba ufunde olu buchule kuze kube sekupheleni, ngokuqinisekileyo uza kukwazi ukufumana iinkalo ezintsha kunye namathuba okuba ubuhle kwaye ukwandisa ukulala kwakho kwesandla.
Isaladi yeklabishi ebusika
Duck nge apulo
Ikhukhamba elumileyo elunamanzi (ukupheka kwangoko)
I-Potato casserole ene-turkey ne-chinan